Nagarik News - 'म पनि सेलिब्रिटी भइसकिछु!'
उपत्यकाबाहिरको यात्रा कस्तो रह्यो?
असाध्यै रमाइलो। धेरै नयाँ ठाउँमा घुमियो। फरक सोच भएका मान्छेहरूसँग भेटियो।
यसअघि काठमाडौँ बाहिर गइएको थिएन?
पश्चिममा त एकचोटि प्रोग्राम टुरमा गएकी थिएँ, साल्सा डान्स देखाउन। तर, पूर्वका धेरै ठाउँ गएको थिइनँ।
तपाईंप्रति त्यहाँका दर्शकको दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो?
वाह! हाम्रो कामको मूल्यांकन गर्ने दर्शक त उपत्यकाबाहिरै रहेछन्। म पनि सेलिब्रिटी भइसकेछु भन्ने महसुस बल्ल भएको छ। काम गर्ने ऊर्जा पनि थपिएको छ।
म्युजिक भिडियोमा हेरेर मात्रै पनि त्यस्तो रेस्पोन्स पाउनुभएछ। फिल्म रिलिज भएपछि कस्तो होला?
त्यही त, ६० वटा म्युजिक भिडियो खेलिसकेँ। केही उपलब्धि छैन जस्तो लागेर मन खिन्न हुन्थ्यो। काठमाडौँमा प्रशंसकले धेरै प्रशंसा गरे भने 'राम्रो छ' भन्थे। तर, बाहिर त हामीसँग तस्बिर खिचाउन पाएकैमा गर्व गर्ने दर्शक पनि रहेछन्। फिल्म रिलिज भएपछि गएको भए अझै बढ्थे होलान्।
रिलिज हुन लागेको फिल्म 'अन्तराल'मा प्रशंसक बढ्ने खालको रोल छ कि छैन?
गज्जबले छ। आफ्नै खुट्टामा उभिएकी, हेल्पफुल र सकारात्मक सोच भएकी खुला विचारकी केटीको भूमिका छ। यस्तो मान्छेलाई सबैले मन पराउँछन्।
फिल्मकी 'त्यो केटी' र तपाईंबीच कत्तिको समानता छ?
छन्, थुप्रै समानता छन्। एक्काइसौँ शताब्दीका प्रायः केटी खुला विचारका हुन्छन्, म पनि छु। मोडलिङ र अभिनयसँगै बुटिक पनि सञ्चालन गरिरहेकी छु।
बुटिकमा बस्न भ्याइन्छ?
अहिले त्यति भ्याएकी छैन। अब समय दिने कोसिस गर्दैछु।
यो क्षेत्रमा गरिखान गाह्रो भएर व्यवसायतिर लागेको हो?
म मोडल/हिरोइनमात्रै होइन, त्योभन्दा राम्रो साल्सा परफर्मर हो। त्यसैले मलाई त्यस्तो गाह्रो छैन। तर, भविष्यका बारेमा पनि अहिल्यै सोचिराख्नुपर्छ भनेर व्यवसाय पनि थालेकी हुँ।
नेपालमा साल्सा परफर्मरको डिमान्ड राम्रै छ त?
परफर्मरको कमी भएकाले डिमान्ड हाई छ। विशेष गरेर ठूला व्यावसायिक कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि साल्सा परफर्मरलाई प्रयोग गर्न थालेका छन्।
फिल्म र म्युजिक भिडियोमा तपाईंको त्यो कला देखिएको खोइ?
त्यो अवसर पाएकै छैन। फिल्ममा पनि साल्सा नाच्ने रोल पाएँ भने अझै बेटर गर्न सक्छु। भिडियोमा पनि आफूलाई जमाउन सक्छु जस्तो लाग्छ।
अहिलेसम्म एउटा मात्रै फिल्ममा अफर आएको हो?
दुइटा फिल्म गरिसकेँ। यसअघि 'सिग्नेचर' भन्ने फिल्म गरेकी थिएँ। तर, दर्शमाझ आउने चाहिँ 'अन्तराल' पहिलो हो। अरू धेरै फिल्मका अफर आइसके, तर हिरोसँग लभ गर्ने, अघिपछि लाग्ने खालका रोलमात्रै छन्। त्यो त सबैले गरेकै कुरा भयो नि। त्यसैले अलि फरक, अझ नेगेटिभ क्यारेक्टरमा अभिनय गर्न मन छ। अहिलेसम्म मेरो अनुहारमात्रै देखिएको छ, त्यस्तो रोल पाए क्षमता देखाउने अवसर पनि मिल्थ्यो।
लभ फिल्मबाहिरै गरेको राम्रो भनेर फिल्ममा गर्न मन नपरेको हो?
अहिलेको युगमा लभ गर्नु नर्मल कुरा हो।
एयर होस्टेसको माग बढ्दो
एयर होस्टेस करिअरमा आकर्षण कस्तो छ? आकर्षण चुलिँदोछ। प्लस टू सकेपछि प्राथमिकतामै पर्ने करिअर हो यो। ग्ल्यामरस पेशा बन्न सफल छ एयर होस्टेस।
डिस्टर्ब्ड मनले परिवर्तन खोज्छ : स्वामी आनन्द अरुण
काठमाडौँको नागार्जुन डाँडामा अवस्थित ओशो तपोवन इन्टरनेसनल कम्युनका संस्थापक हुन्, स्वामी आनन्द अरुण। विदेशमा मात्रै उनका हालसम्म ७५ वटा मेडिटेसन सेन्टर सञ्चालित छन्। ओशोका अनुयायी स्वामी अरुण आफूले लाखौँ व्यक्तिलाई...
११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा...
मोहन निरौला, कलाकार एउटा टेलिफिल्मका लागि लोकेसन हेर्न गएको थियौँ फुटुङमा। एउटा पुरानो घरभित्र छिरेर भर्याकङ चढ्न लागेको थिए। एक्कासी ठूलो हावा हुन्डरीको आवाज आयो। हामीसँगै रहनुभएको गाउँकै मित्रले 'भुइँचालो आयो'...